बालश्रमको अवस्था - Pradesh Dainik
पथरीशनिश्चरे ९, मोरङ
आमाको गर्भ देखि १८ वर्ष मुनिका सबै मानिस बालबालिका हुन् । उनिहरुलाई असर पर्ने कुनैपनि काम गर्न वा श्रम गर्र्न लगाउनु बालश्रम हो । कुनै पनि रोजगारयुक्त कार्य जसले बालबालिकाको बाल्यकालमा दखल दिन सक्छ, स्कुल जानबाट बन्चित हुन्छ वा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रुपमा असर गर्नेलाई नै बालश्रम भनिन्छ । संसार भरि नै बालश्रम कानुन विपरित मानिएको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा भने गरिबी र विद्यालयको वातावरणका कारण बालश्रमको सम्स्या अझै छ ।
कुनै पनि देशको विकास उसका बालबालिकाको कति संख्याले बाल अधिकार पाएका छन् भन्ने आधारमा देखिन्छ र देशको भविष्य पनि तिनै बालबालिकाको भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ जुन बालबालिकाले भोलिका दिनहरुमा देशविकासको अभिभारा आफ्नो काँधमा लिन्छन्। तर दुःख लाग्दो छ कि नेपालमा धेरै जनताले अत्यन्तै गरिबीको जीवन जिउनु परेको छ । यो अवस्थाले बालबालिकालाई जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै बाँच्नका लागि कडा परिश्रम गर्न वाध्य पारेको छ।
नेपालमा सरकारी तर्फबाट बाहेक विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले समेत बालश्रम न्यूनिकरणका लागि लामो समयदेखि विभिन्न गोष्ठी, सभा र सेमिनारमा गरिबी निवारणका कुराहरू गरिन्छन् तर सुधार भने भएको देखिंदैन। अनि देशको दुर्भाग्य रहिरहन्छ र बाल कामदारहरुले आफ्नो जीवन र भविष्यको ठूलो अनिश्चितता बीच डर र कहाली लाग्दो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ। उनीहरू निरक्षरता, शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण जताततै ठगिन्छन् र शोषित भई जीवन कठिन हुन्छ।
उनीहरु झनै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथ्याङ्कहरुले राज्य र २१ औं शताव्दीको सभ्य नागरिक समाजलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा बाल श्रमिक कति छन् ? भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन् । बालश्रमिकहरुको तथ्यांक नभएको र केही समय देखि सो तथ्याङ्को लागि पहल गरिरहेको महिला तथा बालबलिका शाखा प्रमुख गिता कट्टेललेको भनाइ छ ।
यसरी हेर्दा सभ्य र सहरीया संस्कृति विकास हुँदै गएका भनिएका ठाउँमा बालश्रम शोषणका झनै बढी समस्याका रुपमा उजागर भइरहेका छन् । यस्ता नयाँ–नयाँ कथा व्यथाहरुले हामीलाई लज्जित तुल्याइरहेको छ ।
सरकारले नेपाललाई सन् २०२० सम्म बालश्रम मुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बालश्रम मुक्त राष्ट्र बनाउन सरकारले सन् २००४ देखि २०१४ सम्मका लागि दशवर्षे गुरुयोजना बनाएको थियो । तर पछि उक्त गुरुयोजनालाई परिमार्जित गरी सन् २०२० सम्म मुलुकबाट सवै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको हो । उक्त लक्ष्य अनुरुप २०१६ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
पथरीशनिस्चरे नगरपालिका वडा नं. ४ मा वसोबास गर्ने अजय लिम्बू एक बाल श्रमिक रहेका छन् । उनी पथरीशनिस्चरे नगरपालिकामा रहेको भागिरथ मा.वि मा आध्ययन गर्दै उनी मेरिगोल्ड ईंग्लिस बोर्डिङ स्कुलको बसमा ३ महिना देखि काम गरि रहेका हुन् । उनी त्यहा आफ्नो इच्छाले काम गरेको बताउँछन् । त्यहाबाट उनले मासिक रूपमा रु ६ हजार कमाइ रहेको बताए । उनी त्यहा बिहानको ६ः३० देखि १० बजेसम्म काम गर्छन अनि बिहनको १०ः१५ देखि दिउसोको ३ः३० सम्म पढ्ने र पूनः दिउसोको ३ः३० देखि बेलुकाको ६ बजेसम्म काम गरेको बताउछन् । यो उनको रहर हैन बाध्यता हो ।
पथरीशनिस्चरे नगरपालिका वडा न ९ वसोबास गर्ने अर्को पासङ तामाङ बाल श्रमिक रहेका छन् । उनी कक्षा १० को परिक्षा पश्चात् उनी विकास निर्माण छेत्रमा काम गर्न थालेका हुन् । उनको घरको अवस्था निक्कै नै कम्जोर भएकाले छुट्टिको समयमा घरबाट काम गर्नु पर्छ भनेपछी उनले काम गर्न थालेको बताए । उनी त्यहा करिब १ महिना आगाडी देखि काम गरेको बताउँछन् । उनी पथरीशनिस्चरे नगरपालिका वडा न ८ मा रहेको बुद्ध मा.विका छात्र हुन् ।
यी दुईवटा घटना त उदाहरण मात्र हुन् । पथरीशनिस्चरे नगरपालिका भित्र बालश्रम गर्ने बालबालिकाहरुको संख्या निकै ठुलो छ । बालश्रम न्यूनिकरणका लागि नगरमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थीति पनि खासै देखिदैन । यो भयावह स्थीतिको सामना गर्न न त राज्य नै लागेको देखिन्छ न त अन्य सरोकारवालाहरु नै । बालश्रमको मुख्य कारण भनेको गरिबी नै हो भन्ने बुझाइ सबैको छ । तर त्यसको न्यूनिकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कसैले कदम चालेको पाइदैन ।
पथरी पथरीशनिस्चरे नगरपालिका भित्र करोडौं बजेट आउदा पनि बालश्रम गर्ने बालबालिकाहरुका लागि उचित ब्यवस्थापन भएको छैन । बालश्रम गर्ने बालबालिकाहरु पथरीशनिस्चरे नगरपालिका भित्र कत्ति छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।पथरीशनिस्चरे नगरपालिका भित्रबालश्रम गर्ने बालबालिकाहरुको एक चोटी समेत आनुगमन नभएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलले बालबालिकाहरुको अवस्था उजागर गर्ने तथा जोखिममा परेका केहीलाई उद्धार र सहयोग गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ तर यो पर्याप्त भने छैन । अर्कोतर्फ राज्यका कार्यक्रमहरु न त प्रभावकारी छन् न त समस्याप्रति सरोकारवाला निकाय नै गम्भीर छन् ।
सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुबीच कार्यक्रम सञ्चालनको सन्दर्भमा समेत समन्वय हुन सकिरहेको छैन । कतिपय कार्यक्रमहरु त बजेट सिध्याउने ढङ्गले मात्र सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यही तरिकाले बालश्रम उन्मूलनको सरकारको लक्ष्यले पूर्णता पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । नाराले मात्र बालश्रम उन्मूलन हुन सक्दैन, यसको लागि राज्य र नागरिकको ठोस प्रतिवद्धता, पहल र सकारात्मक भूमिका जरुरी हुन्छ । तसर्थ भयावह रुपमा रहेको बालश्रमको वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न बालश्रमिकको रुपमा रहेका बालबालिकाहरुलाई श्रमबाट मुक्त गर्ने मात्रै होइन उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका भित्र बालश्रम गर्ने बालबालिकाहरुको लागि किन बजेट छुट्टिएन ? उनिहरुको भबिस्य बारे किन सोचिएन ?
यस बर्ष बालसन्जालहरु एक्टीभ नभएकाले गर्दापनि सबै वडाबाट सुचिकृत हुने धेरै आगाडी देखि आउँदा पनि बालश्रमलाई नै चाहिँ ध्यान दिएर हेर्न नसकिएको नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट बास्तोलाको भनाइ छ । गत साल बालश्रम शोषण गर्नेहरुलाई बालसंजाल र आफै सहभागी भएर अनुगमन गर्ने काम भएको विष्टको भनाइ छ । यो वर्ष पनि चाडैँ नै अनुगमन गर्ने र त्यस्तो अवस्था पाइएमा नियमन गर्ने विष्टको भनाइ छ । । गतसाल अनुगमन गर्दा आमाले छोडेका र बाबुले छोडेका जस्ता ससाना बच्चाहरु भेटियो । कुनै घरमा त संरक्षक बन्दै बिद्यालय पनि पठाइएको र राम्रो पोजिसनमा भएको भेटिएको थियो। ति बालबालिकालाई सोध्दा पनि खुसी नै भएको पाइएको थियो । यो वर्ष पनि लागूपदार्थ दुव्र्यसनका विषयमा चैँ केही कार्यक्रमहरु भइ नै रहेका छन् । अबविस्तारै अन्य कार्यक्रमहरु आउछन् विष्टले बताउनुभयो । बालश्रम शोषण गराउनुहुदैन भनेर सुचना दिदादिदै पनि काम लागाउनुभयो भने उहाँहरुलाई नीयम अनुसार कार्वाहीको भागिदार बनाइने विष्टले बताउनुभयो ।
नगरमा भएको यो बालश्रम शोषणले पछिको भविष्य अन्योलता तर्फ धकेलिन सक्ने सम्भावनत प्रसस्तै छन् । आजैबाट सबै सरोकारवालाहरुले यस विषयमा चासो दिनु आवश्यक छ ।